I-Linux Mint Debian Edition 3 "Cindy" Cinnamon Edition isilapha, buyekeza manje | Kusuka kuLinux
I-Linux Mint Debian Edition 3 "Cindy" Cinnamon Edition isilapha, buyekeza manje
UClement Lefebvre weLinux Mint umemezele ukutholakala ngokushesha kwe- I-Linux Mint Debian Edition 3 "Cindy" Cinnamon Edition, ngokusekelwe kunguqulo yakamuva ezinzile ye-Debian.
Ukuqhubeka nephupho lokunikeza abasebenzisi okunye okuhlukile, okujwayelekile okusekelwe ku-Ubuntu kweLinux Mint, iLinux Mint Debian Edition (LMDE) 3 "Cindy" Cinnamon Edition iyatholakala ukulanda eletha imvelo yamanje yokuqhafaza I-Cinnamon 3.8 kanye nendawo yokugcina yamuva ezinzile kaDebian.
Ngaphezu kokulungiswa kwamaphutha nokuvuselelwa kwezokuphepha kwe-Debian, i-Linux Mint Debian Edition (LMDE) 3 base package "Cindy" Cinnamon Edition ihlala ifana, ngakho-ke abasebenzisi bakho badinga ukufaka kanye kuphela futhi bazothola izibuyekezo unomphela.
Ungayibuyekeza kanjani i-Linux Mint Debian Edition enguqulweni yayo yakamuva
Uma usebenzisa i-Linux Mint Debian Edition 2, ungabuyekeza ku-version 3 ngokwethula ithuluzi lokuvuselela elifakwe ohlelweni, udinga kuphela ukucindezela inkinobho yokuvuselela ukuze uvuselele i-APT cache bese usebenzisa izinguquko ezikhona.
Ukuze uqhubeke, faka ithuluzi lokuvuselela ngomyalo olandelayo:
sudo ukufaka mintupgrade ukufaka
Ukulanda wonke amaphakheji adingekayo ukuvuselela sebenzisa umyalo olandelayo:
Bese usebenzisa izibuyekezo ngokusebenzisa umyalo olandelayo:
Khumbula lokho I-Linux Mint Debian Edition 2 Cinnamon Edition izosekelwa kuze kube nguJanuwari 1, 2019ngakho-ke unezinyanga ezimbalwa zokuzivuselela ngaphambi kokuthi uhlelo lungagadiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-Linux Mint Debian Edition 3 "Cindy" Cinnamon Edition isilapha, buyekeza manje
Ungayisetha kanjani iseva yewebhu bese ubamba iwebhu ku-GNU / Linux
ICanonical idinga usizo lwakho ukuhlola ukwesekwa kweNvidia kwe-Ubuntu 18.04 ne-18.10